प्लास्टिकको टनेल निर्माण गर्ने हो ? आउनुहोस टनेल निर्माण गर्न सिकौं - कृषि पत्रिका
प्लास्टिकको टनेल निर्माण गर्ने हो ? आउनुहोस टनेल निर्माण गर्न सिकौं
मङ्गलबार १० मङि्सर, २०७६	comments
नेपालमा सामान्यतया प्लास्टिक टनेल तथा बाँसको प्लास्टिक घर बढी प्रचलित छ। सामान्यतया ५ मिटर चौडाई र २० मिटर लम्बाईको प्लास्टिक घर राम्रो मानिन्छ। प्लास्टिक घरको निर्माण गर्दा भने बिज्ञहरुको सहयोग लिनु आवश्यक छ। प्लास्टिक घर मित्र सापेक्षित आद्रता ७० देखि ९० प्रतिशत र तापक्रम करिब २० डिग्री सेल्सियस हुनु बिरुवाको बृद्दि बिकासका लागि उपयुक्त मानिन्छ।
प्लास्टिक घरभित्र खेति गरिने मुख्य तरकारीहरू :
प्लास्टिक घरभित्र सबै प्रकारका तरकारी बालीहरु लगाउन सकिन्छ। बिशेषत बेमौसममा बढी मूल्य जाने तरकारी बालीहरु प्लास्टिक घरमा लगाउने गरिन्छ। सामान्यता गोलभेडा, काक्रो, खुर्सानी, सिमि, भन्टा, सागपात, भिंडी, काउली, बन्दा, फर्सि, लौका, करेला तथा केराउ लगायतका तरकारीहरू प्लास्टिक घरमुनि लगाउने चलन बढ्दो छ।
जग्गा तथा प्लास्टिक छनोट :
सामान्यतया समुद्री सतहदेखि ५०० देखि १७०० मिटरको उचाई , प्रशस्त सूर्यको प्रकाश पर्ने तथा जोडले हावा नचल्ने क्षेत्र प्लास्टिक घर भित्र तरकारी खेति गर्न राम्रो मानिन्छ । भिरालो र बर्षामा भेल पस्ने तथा पानि जम्ने ठाउमा प्लास्टिक घर बनाउनु हुदैन।
प्लास्टिक छनोट गर्दा भने उचित प्रकाश छिर्ने ९० देखि १२० जीएसएम सम्मको प्लास्टिक प्रयोग गर्न सकिन्छ। धेरै बाक्लो प्लास्टिक प्रयोग गर्दा प्लास्टिक घरभित्र प्रकाश कम पर्ने हुन्छ जुन उपयुक्त मानिदैन।
उत्पादन बृदि हुन्छ , गोलभेडा को हकमा प्रति वर्ग मिटर १२ देखि २० के जी अनि ६००० देखि १०,००० सम्म प्रति रोप्ने लिन सकिन्छ तर खुल्ला मा भने मात्र ३००० देखि ४०० के जी मात्र फ़लाउन सकिन्छ ।
एक प्लास्टिक घरमा तिन लहर पोल हुन्छन जसमा एक लहर र दुइ लहर बलेशी हुन्छन । अत : प्रतेक पोलको लहर मा एक एक वटा बलोको आबस्यकता पर्छ्र प्रतेक पोल लाई बला संग राम्ररी बाध्नु पर्छ ।
नोट : थप जानकारी चाहिएमा कमेन्ट गर्नुहोला जानकारीको लागि विज्ञको नम्बर उपलब्ध गराईने छ ।
फोटो : संक्षिप्त प्राविधिक ज्ञानबाट